Ogaden News Agency (ONA) – Cududda Ciidanka JWXO Caalamkaa Qiroo Cidna Kama Qarsoona – Rooble Maxamad
Cududda Ciidanka JWXO Caalamkaa Qiroo Cidna Kama Qarsoona – Rooble Maxamad
Posted by ONA Admin	/ June 24, 2013
Maqaalka todobaadkan oon Jeclaystay inaan jaleeco, waa Awoodda Ciidanka Qaranka Ogadenia ee ONLA & Hadal haynta aan xadidnayn ee Guumaysigu ku hadaaqayo habeeen & maalin, midaas ood mararka qaarkood haminayso in aysan Itobiya & Inta amarkooda qaadata aysan lahaynba shaqo kale, oo aan ahayn hadal haynta Halganka ay Hogaanka uhayso Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia.
Hillaac baxaya & Cirkoo daruuruhu is qabsadeen waxaad filataaba waa Roob, ararta & dulucda hadalkaas waxaan ooga Gol leeyahay, waa Dheriga maxaa karka ka keenay? Waa Dabka. Itobiya maxaa Ku qasbay, in lagu cabsiiyo ONLF in la taageerayo hadday isku taagaan ama hardi Siyaasadeed uu dhex maro dawlad kamid ah Dawladaha Caalamka? Maxaa ku kalifay inay ogolaadaan waxay horey u diideen oo ahaa Wada hadal Nabadeed inay soo fadhiistaan Miis dushiis Isla maalintii La duugayay KT Malez Zenawi? Dhoohane ma ifin karo Jawaabteeda. Waxaa ka keenay waa Halganka xaqqa ah ee ay Umidoobeen shacbiga Ogadenia mid dagaal & Mid siyaasadeedba. Waxaana Markhaati u baahnayn in ONLF tahay awoodda kaliya ee kajirta Geeska Africa, marka laga reebo xukuumadaha aqoonsiga caalamiga ah haysta.
Hadaan waxyar dib ugu laabto taariikhda, taniyo wakhtigii ay Wayaanaha ku qabsadeen xukunka Xisbigan maqaarsaarka ah ee isku magacaaba, EPRDF waxay Ogadenia u gaysteen xasuuqyo kala duwan oo aan xadidnayn oo soo martay marxalado kala gedisan. Waxay kusoo daadiyeen dhulka Ogadenia ciidankii ugu badan ee guumaysiga Itobiya ka jooga meel, oo ay xeryaha Ogadenia soo buux dhaafiyeen kana dhigeen dalka dal u xidhan ciidanka (Military Zone). Waxaa dagaalo isdaba joog ah ku qaaday CWXO iyo shacabka S.Ogadenya oo wadajira. Arintaasi waxay oo markhaati u tahay inaysan rabin Umadda ogadenia ee haysata diinta toolmoon ee islaamka & Dadnimada hiddaha & dhaqanka Soomaaliyeed,Dulli iyo Guumaysi shisheeye inuu dul saarnaado. Waxay muddo Labaatan sano ah ay N/hurayaasha Halgamaya ee CWXO aanay cisho qudha kaseexan Difaaca Ciidda hooyo, waxaadna halkaa ka dareemi kartaa awoodda Jabhada oo Casharo aan lasoo koobi karina u dhigtay maxaysatada Itobiya ay ku soo ururisay Ogadenya, una diiday inay soo saaraan Khayraadka Dabiiciga ah ee Ogadenia oo Guumaysigu uu kaga cunay shirkada caalami ah lacago aad ubadan. Wacdirihii ka gaadhay 2007dii Shiinaha lawaydiin.
Halganka JWXO oo si taxane ah usocda dagaalkiisu muddo Labaatan sano ah, maantana wuxuu taagan yahay Heerkii ugu sareeyay, Mid ciidan & Mid Siyaasadeedba. Iyadood ka daalacan karto Jaaliyadaha & ururada Bulshada ee isku xidhan Dal & Dibad, masuuliyiinta JWXO Guddi fulin, Gole dhexe, Kaadir, Wax garad, Aqoonyahan, Dhalin yaro, Hooyooyin & Dhamaan bulshawaynta kale ee lexjeclada Halganka u nasab sheegta.
Dhinaca kale Lahaystayaasha aan Go’aankooda meel marin karin ee Maamul kusheega kililka ayaa iyagu Boqolkiiba boqol aan lahaynba shaqo kale, oo aan ahayn hadal haynta Halganka oo haba yaraatee aysan jirin shaqo kale oy qabtaan. Dakhliga ugu badan ayaa lagu bixiyaa filim ay samaysteen oy ugu yeedhaan NABADGALYO. Nabadgalyada ay sheegaan waa mid lagu cadaadiyo shacabka aan waxba galabsan, ee loo aaneeyo inay taageeraan Halganka kadibna loo taxaabo jeelal aysan mutaysan. Xidhitaanka shacabka Ogadenia ayaa noqday astaan lagu muujiyo nabad galyo, jeelasha oo labuuxiyo & shacabka oo labarakiciyo ayaa ah asaaska lagu sameeyo ciidamo ay kamid yihiin Hawaarinta loo yaqaano Liyu Police oo macnaheedu yahay Police ka gaarka ah oo cadaadis & Cunaqabatayn saara shacabka. Waxayna meel kaga dheceen fahanka magaca POLICE oo ah dhex-dhexaadiyaha bulshada iyo dawladda. Xeerka caalamiga ah ayaysan kajirin boolis qabanaya shaqada Ciidamada loogu talo galay ee ah dagaalka inay galaan. Arintaa miyaa horumar & Nabad galyo ah?
Waxay soo diraan dadka bulshada Kudhax leh, magaca si loo bahdilo laguna soo khasbaa inay soo xareeyaan dadka haybtooda ah. Waa guumaysi talaabbo uu qaado midda ugu khadhaadh xaqiiqdii. Wixii ka dhacay Nairobi todobaadkii la soo dhaafay wuxuu kuu cadyanaya heerka naf-lacaariga ah ee gumaysiga uu taagan yahay. Waxaad ka dheehan karta Tashiga & Horumarka uu gaadhay Halganka lagu baadi Goobayo Sharafta & Cisiga Soomaalida Ogadenya. Isku dayga gumaysiga ayaan haba yaraatee waxba kabadalin Taageerada ay shacabka u hayaanHalganka inay kor usii qaado mahee. Halganka Ogadenya waxaa taageersan dhamaan dadkii tayada lahaa ee Garanayay qiimaha xoriyadda iyo waxa danta u ah bulshada Ogadenya.
Waxaa ii muuqata Midhihii Xorriyada ee lagu waraabinayo Dhiigga Naftii huraha ee naftiisa u hibeeyay inay umadiisa hesho xorriyad.
Waxaan kula dar-Daarmayaa dhamaan Bulshada bisil ee Ogadenya inay tahay wakhtigii aan heli lahayn, Xaqeenii la duudsiyay ee kor aan uqaadno taageerada Halganka.
Mintid, Midnimo, Iskutashi